Internet Sansar - Page2of 17 - Useful information on the web
October 14, 2019	Health Comments Off on गाडीमा यात्रा गर्दा किन उल्टी हुन्छ ? कारण र समाधानका उपाय
यात्रा आफैँमा रमाइलो हुन्छ । तर, सवारी साधनमा यात्रा गर्दा बान्ता आउने, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने भयो भने यात्रा सजायसरह हुन्छ । यसलाई मोसन सिकनेस भनिन्छ । यसले लामो समय असर गर्दैन । तर, सधैँ यात्रा गरिरहनेहरूका लागि भने यो ठूलै समस्या हो ।त्यस्तै भिडियो गेम खेल्दा र माइक्रोेस्कोपबाट हेर्दा …
October 14, 2019	Health Comments Off on तपाइको ढाड दुख्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुस् !
एजेन्सी । ढाड दुख्ने समस्या भएकाहरुका लागि खुशीको खबर । वैज्ञानिकहरुले यस्ता समस्या भएका पुरुषहरुका लागि उपयुक्त सेक्स पोजिशन पत्ता लगाएका छन् । क्यानडाका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार ढाड दुख्ने समस्या भएकाहरुका लागि ‘डग्गी स्टाइल’ सबैभन्दा उपयुक्त आसन भएको पत्ता लगाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ वाटरलू ओन्तारियोका वैज्ञानिकहरले सेक्सका क्रममा कसरी मेरुदण्ड …
October 14, 2019	Arthik Comments Off on आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर हेर्नुहाेस
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकेको छ । यस्तै आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३८ पैसा तोकेको छ ।सोमबार कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ १३ पैसा र …
October 14, 2019	Manoranjan Comments Off on रेखाको मालिका एक दिनमै ट्रेण्डिङमा, ११ लाखले हेरे, आयो यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं । लोकप्रिय तथा सर्वाधिक चर्चित नायिका रेखा थापाको पछिल्लो चलचित्र ‘मालिका’ हिजोदेखि बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिको युट्यव च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । एकै दिनमा मालिकालाई झण्डै ११ लाख दर्शक÷स्रोताले हेरेका छन् भने ६ नम्बर ट्रेण्डिङमा पुग्न सफल भएको छ ।एक वर्षअघि असोजमै रिलिज भएको मालिका हेरेर हजारौं दर्शकले प्रतिक्रिया दिएका …
October 14, 2019	Health Comments Off on मुटु र अन्य भयानक रोगबाट बचाउने ‘ग्रीन टी’
हाम्रो नेपाली समाजमा संस्कारका रुपमा दैनिक चिया खाने संस्कारका साथ हुर्किरहेका छौ, दुध, चिनी, चियापत्ति र मरमसला मिसाएर पकाएको चिया पिउने गर्दर्छौ । अझ घरमा कोही पाउना आउँदा वा साथीभाईसँग कही कतै भेट्दा पनि चिया खाउन भन्ने प्रचलन पनि कायम नै छ । जुन चिया स्वास्थ्यका लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ, …
October 14, 2019	Health Comments Off on ग्यास्ट्रिक बल्झिदा कस्ता रोग लाग्छन् ? यस्ता छन् बच्ने उपाय थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौं । ग्यास्ट्रिक भनेको सामान्यतया खानपान र रहनसहन नियमित नहुँदा लाग्ने रोग हो । ग्यास्ट्रिक आफैमा ठूलो रोग होईन् । सामान्य रोग हो । तर यो बल्झिदा विभिन्न भयानक रोगहरु लाग्ने गर्छन् । जसमध्ये एक हो माइग्रेन ।के हो माइग्रेन ?माइग्रेन एक प्रकारको न्यूरोलोजिकल रोग भएता पनि मनोशारीरिक रोग पनि …
October 14, 2019	Health Comments Off on लसुन किन खाने ? यस्ता छन अदभूत फाइदाहरू
लसुन एक महत्वपूर्ण घरेलु औषधि हो । प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न भोजन तरकारीमा गरम मसलाको रुपमा लसुनको प्रयोग हुने गरेको छ । यसको खेति हाम्रो देशमा पनि हरेक ठाउँमा हुने गरेको छ ।लसुनका सामान्य लाभ-आयुर्वेदिक मतअनुसार लसुनले वात कफ नास गर्छ र दुखाई शान्त पार्छ । यसले पाचन शक्ति बढाउँछ, …